Mugovera Kufuridzirwa | Martech Zone
Mugovera, March 3, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Mwanakomana wangu, bhiri, arikutungamira kumusoro kurira kwekugadzira kwake High Chikoro kuita kweWizard yeOz. Mwanasikana wangu achave arimo zvakare, achitamba imwe yemunchkins. Katie ave kutowana mamwe ma rave ongororo nevanhu vari mukutamba… kwakanaka chaizvo sezvo achingova kuMiddle School! Kwaive kutambanuka kwaari kunyange kugona kuenda kunopinda mukutamba. Iye anochida kwazvo, zvakadaro. Ndinogara ndichishamisika netarenda revana vangu vese.
Sezvaunogona kufungidzira, mazuva angu neusiku zvino azere nenziyo kubva kuWizard yeOz. Mwanakomana wangu anyorazve "Dai ndaingova nemoyo" mune yazvino acoustic vhezheni. Haana kuzviita kunze kwemusha, zvakadaro. Ini ndaida kumukurudzira zvishoma kuti angotora gitare ndoriridza panguva yekuzorora pakuita nhasi.
Pandakaona vhidhiyo iyi pa3R.e.Medium, ndakamuratidza uye zvakamukurudzira kuti aunze gitare rake mukudzidzira nhasi. Mwanakomana wangu haana dambudziko rekuvaraidza boka revanhu… asi kwete boka revanhu risingazive zviri kuuya. Fungidzira uchiita panzira yepasi peParis! Ndo zvakaitwa nevanhu vane mbiri vane tarenda:
Zvichida izvi zvinokukurudzira! Yakafemera mwana wangu!
PS: Manheru apfuura iniwo ndanga ndine bhiri rendi Iyo Wiz saka tinogona kuwana shanduko yemafambiro. 😉
Akapinza Pfungwa: Kubhuroka muCorporate America
Mar 3, 2007 pa 1: 26 PM
Ini handina tarenda remumhanzi asi ndagara ndichida kufamba ndichipinda panzvimbo ndoburitsa amai, ndakadzima Quincy Jones, majamu anononoka kutarisa izvi, chimbofunga Doug, uyu anogona kunge ari iwe, ini naChris tichidzika pasi. EL muChicago, ngatiedzei. zano riri nani, iwe naChris edzai uye ini ndichabata viedo cam! basa rakanaka
Mar 4, 2007 pa 10: 56 AM
Ndinewe pane iyoyo, JD! Ndinogona kutakura chinyorwa uye ndaimbokwanisa kutamba nezve 100 lbs yapfuura. Ndinoramba ndichiudza mwanakomana wangu paanenge akapfuma uye ane mukurumbira kuti ndichaimba kambo imwe chete naye pachikuva.
Ndofunga arikunetsekana. 🙂
Mar 3, 2007 pa 4: 56 PM
Nonpoint ine yakakura dombo vhezheni yeInzwa (mumhepo manheru ano) zvakare.
Mar 4, 2007 pa 7: 20 PM
Ndine urombo, yaive Yakavigwa track pakuburitswa neMushroomhead
Mar 4, 2007 pa 7: 28 PM
Nderipi albhamu iyo? Mwana wangu aimbofarira Mushroomhead. Ini ndiri munhu anofarira SlipKnot ini… kunyanya mune traffic uye ndinoda kubvisa hasha dzangu. Zvingave izvo kana Notorious BIG (Ndinoteerera kune zvese!).
Mar 3, 2007 pa 9: 49 PM
Hei-Ndaifarira boka racho. Ndatenda nekuchigovera. Zvimwe zvese zvichiri pamusoro pemusoro wangu! (ps. Ndinofanira kuudza Mike kuti atore zvimwe zvinhu panzvimbo yake!)